Endless creativity with 300 building blocks! Build, stack, and explore endless construction possibilities with this set of 300 building blocks in classic colors! Now your little one can build anything they imagine when they use the blocks and special shapes to create tractor,house, funny animals, trains, or whatever else they dream up! Perfect for little hands, these small blocks fit together and come apart easily, helping your child to develop fine motor skills and creativity over hours of open-ended play. The kids also can play with them together, it can help kids build friendship and problem solving, these blocks have developmental benefits. When playtime's over, cleanup is easy with the plastic storage box. Ideal toys for ages 1 to 7.
ကလေးများအားနံပါတ်များ၊ ရေတွက်ခြင်း၊ အရောင်များနှင့်ပုံသဏ္န်များသင်ယူရန်ကူညီပါ။ လက်ငယ်များနှင့်ကြီးထွားလာသောစိတ်များအတွက်ပြုလုပ်ထားသောလုပ်ကွက်များသည်ဆုပ်ကိုင်ရန်လွယ်ကူသည်၊ ထို့ကြောင့်ကလေးငယ်များသည်သူတို့ကစားသည့်အခါကျွမ်းကျင်မှုကိုလေ့ကျင့်နိုင်သည်။
Eco-friendly & တာရှည်ခံပစ္စည်းများ၊ အရည်အသွေးမြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု PP ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသဖြင့်ဤကလေးကစားကွင်းသည်အဆိပ်အတောက်မရှိ၊ အနံ့မရှိ။
မူကြို၊ သူငယ်တန်း၊ စာသင်ခန်း၊ မိသားစုသုံးစသည်
ကျောင်းများ၊ ဟိုတယ်များ၊ မိသားစုသုံး၊ သူငယ်တန်း၊ စာသင်ခန်း၊ မူကြို၊ နေ့ထိန်း၊ ကလေးဆေးရုံများ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ စူပါမားကတ်များ၊ ကလေးများသွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးရုံ၊ လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ